Gabdhaha England oo gaaray Afar dhammaadka Koobka Adduunka ee Dumarka 2019 kaddib markii ay garaaceen Norway… + SAWIRRO – Gool FM
Gabdhaha England oo gaaray Afar dhammaadka Koobka Adduunka ee Dumarka 2019 kaddib markii ay garaaceen Norway… + SAWIRRO
(Paris) 27 Juunyo 2019. Xulka qaranka Gabdhaha England ayaa gaaray wareega Afar dhammaadka Koobka Adduunka ee Dumarka 2019, kaddib markii ay ku garaaceen dhigooda Norway 3-0.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 2-0 ay ku hogaaminayeen Gabdhaha England.
Daqiiqadii 3-aad ee bilawga dheesha Jill Scott ayaa hogaanka u dhiibtay xulkeeda England, waxayna ciyaarta ka dhigtay 1-0, kaddib caawin ay ka heshay saaxiibteed Lucy Bronze.
Ku dhawaad dhamaadka qeybtii hore ee ciyaarta gaar ahaan daqiiqadii 40-aad xulka qaranka Gabdhaha ayaa hogaanka dheereystay waxaana ciyaarta 2-0 ka dhigtay Ellen White oo caawinta goolkan ka heshay Nikita Parris.
Qeybta labaad marka dib leysugu soo laabtay labada xul qaran ayaa waxay sameeyeen qaab ciyaareed si aad aad ah loo jecleystay, waxayna abuureen fursado dhowr ah ay ku dhalin gaareen goolal.
Laakiin daqiiqadii 57-aad gabadha lagu magacaabo Lucy Bronze ayaa ciyaarta soo afjartay waxayna ka dhigtay 3-0 iyadoo caawinta goolkan ka heshay saaxiibteed Beth Mead.
Ugu dambeytii ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 3-0, Xulka qaranka Gabdhaha ee Norway ayaana isaga haray tartankan halka gabdhaha England ay u gudbeen wareega afar dhammaadka Koobka Adduunka ee Dumarka 2019.
Xulka qaranka Kenya oo si layaab leh guul kaga gaaray Tanzania kulan ka tirsan Koobka Qarammada Afrika 2019... + SAWIRRO